wunna | Sanchaung Journal | Page 2
All posts by wunna
ဟဿရသ စစ်စစ်တို့ဖြင့် Jokes United
December 4, 2011 wunna	Leaveacomment
မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကာတွန်းဆရာ ၄၀ ကျော် နှင့် မြန်မာဟာသစာရေးဆရာကြီးများ၏ လက်ရာမွန်များစွာတို့ကို စုစည်းထားတဲ့ JOKES UNITED ဟာသမဂ္ဂဇင်းသစ်ကြီး ထွက်လာတော့မှာဖြစ်ပါကြောင်း တစိမ့်စိမ့်ပြုံးရမယ့် Hotel Jokes United ကဗျာ အမြည်းကလေးနဲ့အတူ ကြော်ငြာလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား…။
၄ လ အတွင်း ဂုံးကျော်တံတားများ အပြီးတည်ဆောက်သွားမည်။
December 4, 2011 wunna	1 Comment
လူဦးရေ ၆ သန်းမှ ၇ သန်းအထိ နေထိုင်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်မြို့အား စင်ကာပူနိုင်ငံကဲ့သို့ ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ လမ်းညွှန်ထားကြောင်း အမှတ်(၁)၊(၂) စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က ကျင်းပသော မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ အမှတ်(၂)စက်မှုဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပသည့် သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ၌ အမှတ်(၁)၊(၂) စက် မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းက ရန်ကုန်မြို့ရှိ ယာဉ်ကြောကျပ်တည်းလျက် ရှိနေသော လှည်းတန်း၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ ဘုရင့်နောင် နှင့် တာမွေ(၅ လမ်းခွ)လမ်းဆုံများ တွင် ဂုံးကျော်တံတားများ တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၄ လနဲ့ အပြီးဆောက်မယ့် ဂုံးကျော်များ
လှည်းတန်း၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ ဘုရင့် နောင်နှင့် တာမွေ(၅ လမ်းခွ)လမ်း ဆုံများတွင် ဂုံးကျော်တံတားများ တည်ဆောက်ရာတွင် ၄ လအတွင်း အပြီးတည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရ ဘတ်ဂျက်မှ ထုတ်ယူ သုံးစွဲတည်ဆောက်မည် မဟုတ်ပဲ ပြည်တွင်းရှိ ဘဏ်များငွေချေးယူ၍ လည်းကောင်း၊ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်မည့် ကုမ္ပဏီမှ စိုက်ထုတ်သုံးစွဲ၍ လည်းကောင်း တည်ဆောက်မည် ဖြစ်သည်ဟုလည်း သိရသည်။
“နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက ပြောကြားပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို စင်ကာပူလို ဖြစ်အောင် ခင်ဗျားတို့ ကြိုးစားညှိနှိုင်းပြီး လုပ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုယ် ကိုက်အောင်လုပ်ပါလို့ ပြောထားတယ်။ အခု ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကမာရွတ်လှည်းတန်းမှာ Traffic တွေ များလာလို့ ဂုံးကျော်တံတားကိုလာ မယ့်လေးလအတွင်းအပြီးလုပ်မယ်။ အလားတူ ရွှေဂုံတိုင်၊ တာမွေ ၅ လမ်းခွဆုံနဲ့ ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံမှာ လုပ်မယ်။ အကယ်၍ လေးလနဲ့အ ပြီးလုပ်မယ်ဆိုပြီး မပြီးရင်လည်း လူထုကို ကျွန်တော်တို့တောင်းပန် ရမှာပေါ့။ ခင်ဗျားတို့မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးပါ။ Traffic သိပ်ကြပ်နေတယ်လို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက ပြောတယ်။ ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကို သွားတုန်းကဆိုရင် မီးပွိုင့်မှာ သုံးလေးခါမိ အချိန်တော်တော်ကြာသွား တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖုန်းရှိလို့ အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။ အလုပ်သမားတွေက အလုပ်ကပြန်ပြီး အိမ်ရောက်မှ ထမင်းချက်ရမယ့်သူမျိုး တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကြန့်ကြာနေလို့ မဖြစ်ဘူး။ အိမ်ကိုလည်း ပြန်ချင် မီးပွိုင့်ကလည်း အကြာကြီး မိမိနေတော့ အလုပ်သမားတွေ အတွက် အဆင်မပြေဘူး။ ထို့အတူ ဘုရင့်နောင်တံတားမှာလည်း ယာဉ်တွေကြပ်နေလို့ ဘုရင့်နောင်တံတားရဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာ တံတားတစ်ခု ထပ်ထိုးမယ်။ ဒါကတော့ လေးလ နဲ့မပြီးဘူး။ တစ်နှစ်လောက်လည်း ကြာရင်ကြာမယ်။ အလားတူပဲ ရထားလမ်း ကွန်ယက်ကိုလည်း ရန်ကုန်မှာဆောင်ရွက်မယ်၊ ကားလမ်း ကွန်ယက်လည်း လုပ်မယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ကာစကဆိုရင် စင်ကာပူက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို လာကြည့်ရတယ်။ အခုကျွန်တော်တို့က ပြန်ကြည့်ရတော့မယ်။ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ကောင်းတာတွေ ယူရမယ်။ အခုလက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူဦးရေက ၆ သန်း နဲ့ ၇ သန်းရှိလာတဲ့အခါမှာ မြို့ပြင်ကနေ အလုပ်လုပ်ဖို့ သွားလိုက်ပြန်လိုက် သွားလာနေရတဲ့ အလုပ်သမားတွေ အဆင်ပြေဖို့ ကျွန်တော်တို့ကုစားနေပါတယ်။ ကုစားတဲ့အလုပ်စပြီ လို့ပြောချင်တယ်။ ဂုံးကျော်တံတား တွေ အများကြီး ဖြစ်သင့်တာပေါ့။ လတ်တလောတော့ ၄ လလောက် အတွင်းမှာ ဂုံးကျော်တံတား ၄ ခုကို အမြန်ပြီးအောင်လုပ်မယ်။ ဂုံးတံတား တွေကို Pre card စနစ်နဲ့လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်”ဟု အမှတ် (၁)၊(၂) စက် မှု ၀န်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ ဦးစိုးသိန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက “လှည်းတန်းဂုံးကျော်အတွက် ကမ္ဘောဇ ဘဏ်က ငွေချေးယူပြီး လုပ်မယ်။ တာမွေ ၅ လမ်းဆုံအတွက် ကျွန်တော်တို့ စက်မှုဘဏ်ကချေးယူပြီး လုပ်မယ်။ ရွှေဂုံတိုင်နဲ့ ဘုရင့်နောင် လမ်းဆုံဂုံးကျော်တွေ အတွက်ကတော့ တာဝန်ယူမယ့် ကုမ္ပဏီက အရင်းစိုက်ထုတ်လုပ်မယ်။ B.O.T စနစ်နဲ့ လုပ်သွားမှာပါ။ တည်ဆောက်တဲ့အခါ လမ်းတွေကို ပိတ်ပြီးမဆောက်ဘူး။ မလှမ်းမကမ်းမှာ တံတား အချပ်တွေကို အရင်လုပ်မယ်။ ပြီးရင် ဂုံးကျော်ဆောက်မယ့်နေရာမှာ ပိုင်တွေရိုက်ပြီး ကရိန်းတွေနဲ့ တပ်ဆင်မှာ ဖြစ်လို့ လမ်းလည်းမပိတ်တော့ဘူး”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
မိုးပျံရထားလမ်းအတွက် စင်ကာပူနဲ့ချိတ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရှာ
ရန်ကုန်တွင် မိုးပျံရထားလမ်း တည်ဆောက်ရန်အတွက်လည်း စင်ကာပူနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်သူ ရှာဖွေနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ မြို့ပတ်ရထားလမ်း ကွန်ယက်အား တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းရှင်များ ရှိပါကလည်း လာရောက်ဆွေးနွေး ရယူလုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
“စင်ကာပူနဲ့ချိတ်ဆက် ပြီးတော့လည်း Sky Rail လုပ်ဖို့ Investment လုပ်ဖို့ ရှာဖွေနေပါပြီ။ စင်ကာပူ သံအမတ်ကြီးကိုလည်း ပြောကြားထားပြီးပါပြီ။ မြို့ပတ်ရထားလမ်း လုပ်ကိုင်လိုတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း လာရောက်ဆွေးနွေးပြီး ရယူလုပ်ကိုင်မယ်ဆို ခွင့်ပြုပေးသွားဖို့ ရှိပါတယ်”ဟု အမှတ်(၁)၊(၂) စက် မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင MIC ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးစိုးသိန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
လမ်းပျက်တွေကိုလည်းပြင် ရေဆိုးစွန့်ထုတ်တဲ့ စနစ်ကိုလည်းပြင်၊ ကားပါကင် ပြဿနာပါ ဖြေရှင်းမယ့် ရန်ကုန်
ရန်ကုန်မြို့တွင်းအပြင် မြို့ပြင် မြို့နယ်များရှိ လမ်းပျက်များကိုလည်း ပြင်ဆင်ရန် ညှိနှိုင်းထားကြောင်း နှင့် ရေဆိုးစွန့်ထုတ်စနစ်၊ မိလ္တာစနစ်မှအစ ပြန်လည်ပြင်ဆင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
“ပျက်နေတဲ့ လမ်းတွေအမြန် ပြင်ဆင်မယ်။ သာကေတတို့လို မြို့ပြင်ဘက်က ပျက်နေတဲ့ လမ်းတွေကိုလည်း အမြန်ပြင်ဖို့အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်ရယ်၊ မြို့တော်ဝန်ရယ်နဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးအမြန်လုပ် သွားမယ်။ ကျွန်တော့်ဘက်က မြို့ တော်ဝန်ကို ညှိနှိုင်းထားတယ်။ နေ့ လည်ဘက်မှာ လမ်းတွေမပြင်ပါနဲ့ ညပိုင်းပဲပြင်ဖို့။ နေ့လည်ဘက်ပြင်တယ်ဆိုရင် ယာဉ်ကြောတွေ ပိတ်နေလို့ အလုပ်တွေတော်တော် ပျက်တယ်။ ဂျပန်၊ အင်္ဂလန်တို့ဆိုရင် ည သန်းခေါင်ကျော်မှပြင်တယ်။ ဒါတွေကိုလည်း စတင် အကောင်အထည်ဖော်မယ်။ နောက်ပြီးတော့ ရန်ကုန် မြို့အတွက် သန့်ရှင်းတဲ့ သောက်သုံးရေရရှိဖို့လည်း ဆောင်ရွက်မယ်။ နီးနီးနဲ့လွယ်လွယ်၊ ရေသန့်သန့်ရဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ ရန်ကုန်မြို့ ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်လက်ထက် ကတည်းက တည်ဆောက်ခဲ့တာဆိုတော့ အခုကျွန်တော်တို့ သန့်ရှင်း သပ်ရပ်အောင် လုပ်တော့မယ်။ ပြည်ပက အကူအညီရရင်လည်း ယူပြီး လုပ်သွားမယ်။ ရေဆိုးစွန့်ထုတ်တဲ့ စနစ်ဆိုရင် ပျက်နေတာတွေကို မပြင်တော့ဘူး အသစ်ပဲ လုပ်တော့မယ်။ ကားပါကင်ထားဖို့ အတွက်လည်း လုပ်ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားပါပြီ” ဟု လည်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါ သည်။
ပင်စင်ယူပြီး အိမ်ပိုင်မရှိသည့် ၀န်ထမ်းများ မဖြစ်စေရေး ၀န်ထမ်းအိမ်ရာသစ်များ တည်ဆောက်မယ့် အစီအစဉ်ကောင်းပါရှိ
“၀န်ထမ်းတွေ အသက် ၆၀ ကျော်လို့ ပင်စင်ယူပြီးရင် အိမ်မ၀ယ်နိုင်တာ များပါတယ်။ အဲဒီလိုမဖြစ်ဖို့တွက် ရန်ကင်းမှာလို ကျွန်တော်တို့ ၀န်ထမ်းအိမ်ရာတွေပါ တည်ဆောက် ပေးတဲ့ အစီအစဉ်လည်းပါ ပါတယ်။ မြို့ထဲမှာတော့ မရနိုင်ဘူး ဒါပေမယ့် သင့်တော်တဲ့နေရာရှာပြီး ဆောက်မှာပါ။ ၀န်ထမ်းတွေက လစဉ်ပေးရင်း ပေးရင်းနဲ့အပိုင် ဖြစ်သွားမယ့်မှာပေါ့။ အခုလိုလုပ်ရင် အိမ်ပိုင်လည်းရသွား မှာပေါ့”ဟု MIC ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးသိန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်တွင် နောက်ပိုင်း၌ စင်ကာပူကဲ့သို့ပင် ယာဉ်လိုင်းများနှင့် ယာဉ်စီးခပေးသည့် စနစ်များ အထိပါ တစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်း ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ရင်းဖြင့် ရန်ကုန်အား ကုစားပေးမည် ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ရန်ကုန်အတွက် အဓိကကျတဲ့ Yangon City Development Plan ရေးဆွဲပြီး လုပ်မယ်
ရန်ကုန်မြို့ကုစားရေးအတွက် အဓိကကျသည့် Yangon City Development Plan အား ရေးဆွဲကာ အဆိုပါ Plan အတိုင်း ပြည်တွင်း ပြည်ပ အကူအညီများဖြင့် လုပ်ကိုင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“Yangon City Development Plan ကိုရေးဆွဲပြီး လုပ်မှာ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင်တို့ ရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့တွေနဲ့ ရေးဆွဲ လုပ်ဆောင်မှာပါ။ အဓိကျတာက Yangon City Development Plan ပါ” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့သည်။
CREDIT: Weekly Eleven
November 16, 2011 wunna	Leaveacomment
တောက်တဲ့သတင်း မှားယွင်းကြောင်း 7DAY ဖြေရှင်း
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ) ။ ။
ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် ကျပ်သိန်းပေါင်း တသောင်းခုနှစ်ထောင်တန် တောက်တဲ့ သတင်းပါ ဓါတ်ပုံနှင့် သတင်းအချက်အလက်အများစုမှာ တောက်တဲ့အဝယ်တော်တဦး၏ လုပ်ကြံပြောဆိုမှုသာဖြစ်၍ သတင်းမှားယွင်းခဲ့ကြောင်း ပြည်တွင်းထုတ်7DAY သတင်းဂျာနယ်က ပြောဆိုသည်။ “သုံးပေခွဲကျော်ရှိ တောက်တဲ့ တကောင် ကျပ်သိန်းပေါင်း တသောင်းခုနစ်ထောင်ဖြင့် ဝယ်ယူ”ဟူသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ထုတ် ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံး၌ ဓါတ်ပုံနှင့်တကွဖော်ပြခဲ့ရာ ယင်းသတင်း မှားယွင်းသဖြင့် စာဖတ် ပရိတ်သတ်အား တောင်းပန်ကြောင်း အင်္ဂါနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အရောင်းရဆုံးဂျာနယ်တခုဖြစ်သည့်7DAY ၏ လူမှုကွန်ယက်အင်တာနက် စာမျက်နှာ Facebook ၌ ရေးသားထားသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ဆည်ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် တောက်တဲ့ရောင်းဝယ်မှုတွင် တောက်တဲ့ အဝယ်တော် ဆိုသူက အင်တာနက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ထိုင်းနိုင်ငံမှ တောက်တဲ့ဓာတ်ပုံအား ကုန်သည်ထံ ပြသခဲ့ကြောင်းနှင့် ကုန်သည်ကလည်း ယုံကြည်သည့်အတွက် ကျပ်သိန်းပေါင်း တသောင်းမှ စတင်ပေးခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ဈေးမတည့်သည့်အတွက် ကျပ်သိန်းပေါင်း တသောင်း ငါးထောင်အထိ ဈေးတိုးပေးခဲ့ရာ ပွဲစားက တခြား သူတဦးအား ကျပ်သိန်းပေါင်း တသောင်းခုနစ်ထောင်ဖြင့် ရောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ကုန်သည်၏ ပြောဆိုမှုကို သတင်းယူ ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကုန်သည်မှာ ယခင်ကတည်းပင် ဂျာနယ်သို့ သတင်းပေးကူညီခဲ့ပြီး ယုံကြည်ရသည့် သတင်းရင်းမြစ် ဖြစ်သည့် အတွက် ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ၊ ကုန်သည်မှ ကျပ်သိန်း ငါးသောင်းအထိ ဈေးပေးဝယ်ယူခဲ့ သည်မှာလည်း မှန်ကန်ကြောင်း7DAY ဂျာနယ်က ပြန်လည်ဖြေရှင်းထားသည်။ သတင်းဖော်ပြရာတွင် တိကျ ခိုင်မာရန် အတွက် ကွင်းဆင်းလေ့လာမှု မရှိဘဲ ဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် လုပ်ကြံ ရေးသားခြင်း မဟုတ်ကြောင်းလည်း ဖြေရှင်းချက်တွင် ပါရှိသည်။ ဂျာနယ်တွင် သတင်းပါရှိစဉ်က စာဖတ်သူများအကြား ငြင်းခုံဝေဖန်မှုများရှိခဲ့ပြီး အင်တာနက်စာမျက်နှာများနှင့် Facebook စာမျက်နှာတွင်လည်း ရေပန်းစားခဲ့သေးသည်။
တောက်တဲ့ တစ်ကောင် ကျပ်သိန်းပေါင်း တစ်သောင်းခုနစ်ထောင်
November 15, 2011 wunna	Leaveacomment
၃ ပေခွဲကျော်ရှိ တောက်တဲ့ကို ကျပ်သိန်းပေါင်း တစ်သောင်းခုနစ်ထောင်ဖြင့် ဝယ်ယူ
အဆိုပါ တောက်တဲ့အား မန္တလေးဒေသခံ တရုတ်ကုန်သည်များက ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပြီး တောက်တဲ့၏ ၃ ရက်တစ်ကြိမ် အန်ထုတ်သော အန်ဖတ်အား ဆေးဖော်ရာတွင် အသုံးပြုကြောင်း သိရ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ဆည်ကျေးရွာတွင် တောက် တဲ့ တစ်ကောင်ကို ကျပ်သိန်းပေါင်း တစ်သောင်းခုနစ်ထောင်ဖြင့် အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်က အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ “ကျောက်ဆည်ရွာက တောက်တဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီရွာကိုယူပြီး အရောင်းအဝယ်ဖြစ်တာ တောက်တဲ့အရှည်က ၃ ပေခွဲရှိတယ်။ အလေးချိန်က တစ်ပိဿာလေးဆယ်ကျပ်သားရှိတယ်”ဟု မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးကဆိုသည်။
အဆိုပါ တောက်တဲ့အား မန္တလေးဒေသခံ ကုန်သည်တစ်ဦးက ကျပ်သိန်းပေါင်းတစ်သောင်းဖြင့် ဝယ်ယူရန် ကနဦးကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဟု မန္တလေးဒေသခံ တောက်တဲ့ကုန်သည်တစ်ဦးက ဆိုသည်။ “ကျပ်သိန်းပေါင်း တစ်သောင်းပေးတာ မရောင်းလို့ သိန်းငါးသောင်းပေးမယ် သွားကမ်းလှမ်းတော့ ရောင်းပြီးကြောင်း သိလိုက်ရတယ်”ဟု အဆိုပါ ဒေသခံ ကုန်သည်ကဆိုသည်။
အဆိုပါ တောက်တဲ့အား မန္တလေးဒေသခံ တရုတ်ကုန်သည်များက ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပြီး တောက်တဲ့၏ ၃ ရက်တစ်ကြိမ် အန်ထုတ်သော အန်ဖတ်အား ဆေးဖော်ရာတွင် အသုံးပြုကြောင်း သိရသည်။ ဈေးကွက်တွင် ၂၅ ကျပ်သားအထက် အလေးချိန်ရှိသော တောက်တဲ့များကို မန္တလေးမြို့၌ အခြေစိုက်၍ လိုက်လံဝယ်ယူနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Credit: 7Day News Journal / Planet News
မြစ်ကော – မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)
September 14, 2011 wunna	Leaveacomment
သစ်တောတို့ စိမ်းရပေမည် …
ရေဝေတောတွေ ဆိုင်းစို့ စို့ 
… မှိုင်းညို့ ညို့ မှုန်ရီရီ …
ရေပြာကြည်သမျှ မြန်မာ့သွေးဟေ့ …
နောင်အရှည်မမျှော် မြန်မာပျောက်အောင်လို့ 
………. မြစ်ကောတဲ့နေ့ ။ ။
August 22, 2011 wunna	1 Comment
“ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ဆက်စပ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊ အတတ်ပညာဆိုင်ရာ နှင့်
နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပြဿနာ အလုံးစုံကို ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး ပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်
အောင်မြင်စွာ ဖြေရှင်း နိုင်ကြ ပါမည်” (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)
ချစ်စွာသော ဧရာဝတီ။ (ဒဂုံတာရာ)
ဧရာဝတီဆိုတဲ့စကားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ ပြည့်ပြည့်၀၀ နားလည်ခံစားနိုင်မှုမရှိခဲ့ရင်
ကိုယ်ကျိုးရှာမှုတွေ အတ္တကြီးမှုတွေနဲ့ ဧရာဝတီရဲ့ ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကို
ဧရာဝတီဟာ ရာဇ၀င်သစ်ကို ထွင်းထုရာ
ဧရာဝတီဟာ သောင်ထွန်းနေတဲ့ ရင်ကိုပွေ့ပိုက်လို့
ဧရာဝတီဟာ စွန့်ပစ်ခံကလေးငယ်လို ငိုကြွေးလို့။ (စိုးရိမ်)
ခု တံတားအစင်းစင်း မင်းအပေါ်ခွလို့၊
သြ ငါတို့ရဲ့ သွေးလွှတ်ကြောမကြီး၊
မဟာမြစ်မင်းလည်း လူတို့ပြုသမျှ နုရပြီလား။ (မောင်လင်းရိပ်)
ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ အတော့်ကို လှပါတယ်
သို့သော် ရေစပ်စပ်နဲ့ မြစ်ကြီးကိုတွေ့ရတော့ … (မိုးဝေး)
ထိုဧရာဝတီမြစ်ကြီးသည် တည်ကြည်ခံ့ညာစွာ စီးဆင်းလာခဲ့၏။
စီးဆင်းပါလေဦး…. ဧရာဝတီ….။ (နောင်ကျော်)
ဧရာဝတီသည် သူချစ်သည့်ပုဂံ၊ သူချစ်သည့်မြန်မာကို
နီးသထက်နီးအောင်ကပ်ရင်း အားပြည့်မာန်ပြည့် စီးဆင်းနေခဲ့ဖူးသည်။
ခုတော့ ဧရာဝတီသည် လောကနန္ဒာမှ၊ ပုဂံမှ၊ သူချစ်သောမြန်မာမှ
တစ်စစ ဝေးသထက် ဝေးလာကာ ကျုံလှီသိမ်ငယ်ခံရလေပြီ။ (နီဟိန်းမော်)
ဒီမြစ်ကြီးရဲ့ ရေသယံဇာတကို အမြတ်ထုတ် အကျိုးရှာလိုသူ အသင်တို့၊
ဒီမြစ်ကြီးကို သင်တို့ပိုင်ဆိုင်သလို ကျန်တဲ့ သန်းခြောက်ဆယ်သော မြန်မာပြည်သူတို့လည်း
အတူတကွ ပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်တယ်။ (ဌေးဝင်းနှစ်)
ဒီနေရာမှာ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးစီးဆင်းခဲ့တာပေါ့ကွယ် ဆိုပြီး
တစ်ချိန်က ဧရာဝတီပုံပြင်ကို အမွေပေးခဲ့မလား
နှလုံးသားရော ဦးနှောက်ရော အလုပ်လုပ်ကြဖို့ အချိန်တန်နေပါပြီ။
ဒါကို မသိသားဆိုးဝါးနေကြဦးမယ် ဆိုရင်တော့ဖြင့်… (နန္ဒကြယ်စင်)
အကြည့်ခံတဲ့ ဧရာဝတီဟာ မြေရဲ့ အနုပညာ။
အမေလိုလဲ ကျေးဇူးကြီးကာ သူ့ရင်ခွင်မှာ မှီတွယ်နေတဲ့ သက်ရှိများစွာရယ်။
သူ့ကျေးဇူးကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲလို့ ဥာဏ်သေးသေးလေးနဲ့ မတွေးတတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အမြစ်မြဲမယ့် သစ်ပင်ငယ်လေးတွေကို
ကမ်းပါးစောက်တစ်လျှောက်မှာ စိုက်ကြည့်ချင်သေးတယ်။ (မယ်ကိုး)
မိခင်ဧရာဝတီ၊ ကိုယ့်အမျိုးသားကိုယ်စားပြု ဧရာဝတီအပေါ်
August 18, 2011 wunna	Leaveacomment
ဂရိပုံပြင်တွေထဲက မိန်းမကြမ်းစစ်သည်တွေပေါက်ဖွားရာဒေသလို့လည်း ပြောတယ်။
အဓိပ္ပာယ်က “လှေတို့ကိုဇီဝိန်ချွေသူ” (boat destroyer)
ဌာနေ လူနီရိုင်းတွေရဲ့ ဘာသာစကားအရ Misi Sipi
အဓိပ္ပာယ်က “မဟာအာပေါ” (big water)
ကမ္ဘာ့အရှည်လျားဆုံးမြစ်။ ဂရိလို Neilos ၊ လက်တင်လို Nilus
အဓိပ္ပာယ်က မြစ်ဝှမ်းလွင်ပြင်၊ လူ့ယဉ်ကျေးမှုများရဲ့ သမိုင်းအစ
တရုတ်မှာ “ရွှေသဲဝါမြစ်” (Golden Sand River) အမည်ရခဲ့တဲ့မြစ်
တရုတ်မှာ Liancang Jiang
ထိုင်းမှာ Mae Nab Khon
ဗီယက်နမ်မှာ Song Tien Giang
ခမာနီတွေကြောင့် သွေးစွန်းခဲ့တဲ့ မြစ်။
အဓိပ္ပာယ်က elephant river
ဆင်များ မှီတင်းနေထိုင်ရာ မြစ်။
June 24, 2011 wunna	Leaveacomment
တစ်နှစ်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
စာမေးပွဲကျတဲ့ ကျောင်းသားကို မေးကြည့်ပါ။
တစ်လရဲ့ တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
လမစေ့ဘဲ ကလေးမွေးတဲ့ မိခင်ကို မေးကြည့်ပါ။
တစ်ပတ်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်အယ်ဒီတာကို မေးကြည့်ပါ။
တစ်နေ့ရဲ့ တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
တစ်နာရီရဲ့ တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
တစ်မိနစ်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
ရထားမမီလိုက်တဲ့ ခရီးသည်ကို မေးကြည့်ပါ။
တစ်စက္ကန့်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
တစ်မီလီစက္ကန့်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
အိုလံပစ် ငွေတံဆိပ်ရှင်ကို မေးကြည့်ပါ…………………။
June 1, 2011 wunna	Leaveacomment
ဘီလူးမင်းရဲ့ သစ္စာကို တွေ့ရှိ။
သိန်းခိုပြည်လည်း ပြာကျသွားပြီ။ ။
သရပါ၊ ၂၀၁၁ မေလ